सन्दिप आईपीएलको इमर्जिङ प्लेयर बन्ने पक्का ! भोटिङमा बनाए यति ठुलो अग्रता – Nepal Trending
सन्दिप आईपीएलको इमर्जिङ प्लेयर बन्ने पक्का ! भोटिङमा बनाए यति ठुलो अग्रता
On ४ बैशाख २०७६, बुधबार १२:५३
काठमाडौं । लगातार दोस्रो वर्ष आईपीएलमा खेलिरहेका नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने इमर्जिङ प्लेयरको अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका छन् । यो अवार्डको विजेता अनलाइन भोटिङ र कमेन्टेटरहरुको मतका आधाचरमा चयन गरिन्छ ।
खेल नै नखेले पनि नेपाल आईसिसिको बरियतामा एक स्थान माथि उक्लियो ! आईसीसीको पुरा वरीयता हेर्न यहाँ क्लिक गरौ ।